विश्वकपको खेल जारी, रुसको ह्याट्रिक जित नजिक पुग्दै, साउदी अरेबीया शुन्यमै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकपको खेल जारी, रुसको ह्याट्रिक जित नजिक पुग्दै, साउदी अरेबीया शुन्यमै
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महाकुम्भ रुस विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसले ३ गोलको अग्रता लिएको छ ।
घरेलु टोली रुसले एसियाली राष्ट्र साउदी अरेबीयामाथि दोस्रो हाफ चलिरहँदा ३–० गोलको अग्रता लिएको हो । पहिलो हाफ २–० गोल भएको खेलमा दोस्रो हाफको ७१ औं मिनेटमा रुसले तेस्रो गोल गरेको हो ।
रुसका लागि ७० औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका खेलाडी आर्टेम ज्युबाले मैदान प्रवेश गरेको एकै मिनेटमा गोल गर्न सफल भए । उनले सुरुवाती गोलका लागि पास गर्ने खेलाडी अलेसान्ड्र गोलोभिनको पासमा गोल गरेका थिए ।
यसअघि रुसका लागि सुरुवाती गोल खेलकोे १२ औं मिनेटमा लरी गाजन्सकीले हेडरमार्फत गरेका थिएभने दोस्रो गोल पहिलो हाफ सकिन २ मिनेटबाँकी छँदा डेनिस चेरिसेभले गरेका थिए । दोस्रो हाफ जारी ।
साउदी खेलमा फर्कने प्रयास गरिरहेको छ । पहिलो हाफमा केहि बलियो देखिएको साउदी यतिबेलाभने कमजोर देखिएको छ । रुस विश्व वरियतामा साउदीभन्दा कमजोर टोली भएपनि आयोजक राष्ट्रले अहिलेसम्म उद्घाटन खेलमा हारेको इतिहास छैन् ।